Marvel's MODOK Trailer Inotarisa Nekunetseka Kunoshamisa naJon Hamm sa' Iron Man '
musha Horror Varaidzo Nhau Marvel's MODOK Trailer Inotarisa Nekunetseka Kunoshamisa naJon Hamm sa' Iron Man '
Horror Varaidzo NhauNgoro (firimu)
Mumwe wevanhu vakaipa kwazvo kunze kweMushamhu Universe maoko pasi MODOK Ndicho chikonzero nei karavhani yazvino yeiyo iri kuuya Hulu nhepfenyuro iri kunakidza kwazvo. Nepo, Marvel aigona kuve akaita iyi yakatwasuka kumusoro yakakomba supervillain nyaya iyo yairidza iyo yakatwasuka, ivo vafamba inonakidza nzira.
Kubva pane yekumira yekufamba mifananidzo kune yeguta rekuratidzira uye nezwi rayo raPatton Oswalt semutungamiri MODOK, idzi dzakateedzana dziri kuzotonga uye dzinoita kuti isu tiseka kuseka kwedu kunze tichiri vakuru. Ndiri kureva, Jon Hamm se Murume wesimbi pachayo chipo!
Mutsara we MODOK inoenda seizvi:
Iye megalomaniacal villain (akataurwa naPatton Oswalt) agara achitevera kurota kwake kwezuva rimwechete achikunda pasi. Asi mushure memakore ezvimhingamupinyi nekutadza kurwisa magamba ane simba kwazvo epasi, MODOK akamhanya nesangano rake rakaipa CHIMWE muvhu. Akaneta semutungamiri weAIM, uku achitarisana nemuchato wake wakakoromoka uye hupenyu hwemhuri, iyo Mental Organism Yakagadzirirwa Chete Kuuraya yakagadzirirwa kusangana nedambudziko rake guru parizvino! Anogona here kuvaka zvakare CHIMWE, kugadzirisa imba yake iri kuparara, kufadza mwanasikana wake achiri kuyaruka, uye kubatsira mwanakomana wake kugadzirira kuuya kwake bar mitzvah? Aya angori mamwe ematambudziko mazhinji MODOKI anofanira kukunda!
Ndiri kureva, kunyangwe setup yacho inonzwika kushamisa. Ndinoziva kuti vazhinji venyu imi varume muchashuvira kuti nhepfenyuro yaenda nenzira yakaipa yevakomana uye iratidze hunhu chaihwo hweMODOK, asi ini ndinofunga kuti izvi zvinozorodza uye nhungamiro yakanaka yekutora zvinhu. Turera yakandikunda pamaoko pasi.
Imi varume munofungei nezve toni yekutamba yeHulu MODOK? Tiudzei muchikamu chemashoko.
Alexandre Aja's yazvino Netflix firimu, Oxygen inomudzosera kumidzi yake yakanyanyisa. Tarisa tirera kunze apa.